kudzidziswa » Noticias » Maitiro ekuona achangoshandiswa maapuro pa Android
Iwe unogona kuona zvichangobva kushandiswa maapplication pa Android uchishandisa mamwe eiyo system matangi. Imwe yacho irondedzero yezvikumbiro zvinomhanya kumashure, izvo zvinoratidza mapurogiramu ekupedzisira akavhurwa pachikuva.
Imwe nzira, iyi inosarudzika kune Samsung Galaxy smartphones, inokuratidza chaizvo apo imwe app yakapedzisira kushandiswa. Uye kune zvakare saiti yeGoogle inonyora zviitiko zvenharembozha yako. Dzidza maitiro ekuona kuti ndeapi mapurogiramu akapedzisira kushandiswa paAndroid.
3 Nzira dzekuona Zvichangoshandiswa Zvishandiso pa Android
Mhanya mapurogiramu kumashure
Imwe yedzakareruka nzira dzekuona ichangoburwa maapuro paAroid ndeyekuvhura hwindo nemaapps arikumhanya kumashure. Kuti uite izvi, tinya chiratidzo chemitsetse mitatu pazasi kuruboshwe, kana kudzvanya uye dhonza kubva pasi kuenda kumusoro (kana navigation uchishandisa majestures) kuvhura rondedzero yemaapps.
Mapurogiramu anogara achionekwa kubva paapedzisira kuvhurwa kusvika kune ekare. Zvakakosha kucherechedza kuti kana ukavhara kana kumanikidza kumisa app inomhanya, inobviswa kubva pane rondedzero yezvishandiso zvekumashure.
Iyo yekumashure app runyorwa inogara ichiratidza ichangoburwa yakavhurika mapurogiramu paAroid (Screenshot: Caio Carvalho)
Svika iyo "Google My Activity" webhusaiti
Google Chiitiko Changu iwebhusaiti yemahara kubva kuGoogle inonyora nhoroondo yako yese yezviitwa pamasevhisi ekambani. Izvi zvinosanganisira Android uye chero chiito pane inoshanda sisitimu maapplication, kubva pakuvhura kana kuvhara mapurogiramu kusvika pakudzima kana kudhawunirodha zvirongwa zvitsva.
Kushandisa zviri papeji, tevera dzidziso iri pazasi:
Enda ku "myactivity.google.com" (pasina makotesheni) mubrowser yako uye pinda kuGoogle account yako;
Dzvanya pa "Webhu & App Chiitiko". Zvadaro, pane chidzitiro chinotevera, batidza chimiro;
Dzokera kuGoogle My Activity skrini yekumba;
Dzvanya pa "Sefa nezuva uye chigadzirwa";
Tarisa "Android" bhokisi uye baya "Shandisa";
Ona zvichangobva kuitika pafoni yako yeAndroid, kusanganisira zvichangobva kushandiswa.
Webhusaiti yeGoogle inokutendera kuti utarise maapplication achangobva kushandiswa pa Android (Screenshot: Caio Carvalho)
Vhura Android Settings (Samsung)
Samsung Galaxy line mafoni ane yakatsaurirwa sefa inoratidza ichangobva kushandiswa mapurogiramu pa Android. Ingo pinda zvigadziriso zvehurongwa, sezviri mudzidziso inotevera:
Vhura iyo "Settings" app;
Enda ku "Applications";
Tinya iyo-mitsetse mitatu yetiki icon padyo ne "Mapurogiramu Ako";
Pasi pe "Ronga ne", tarisa "Yazvino Kushandiswa";
Pedzisa ne "OK".
Mafoni eGalaxy ane tsika sefa yekuona achangoshandiswa maapplication pa Android (Screenshot: Caio Carvalho)
Clever. Iwe unozogona kuona iyo ichangoburwa yakashandiswa maapplication paAndroid, kubva kune ichangoburwa kusvika kune yekare. Kurangarira kuti iyo nzira inoshanda paSamsung Galaxy smartphones inomhanyisa One UI interface.
Isa yako email kero kuCanaltech kuti ugamuchire zvigadziriso zvemazuva ese nenhau dzichangoburwa kubva kunyika yetekinoroji.
Instagram ichave yakanyanya TikTok nenhau idzi
WhatsApp yakagadzirisa chichemo ichi chemushandisi panguva yekufona kweboka
Spotify inotanga kuburitsa karaoke chimiro, asi pane kubata
Netflix: ¡La Casa de Papel Korea solo tiene 6 episodios! ¿Porque?
La declaración anual del MEI tiene plazo hasta el jueves (30); hacer preguntas
Mushure mezvose, iyo Apple Watch Series 8 haizove nekuvandudzwa kukuru